Kuwani 22 + Tilmaamayaasha Anime ee Tsundere Waa Qaar Ka Mid Ah Kuwa Ugu Fiican - Kale
Haddii aad raadineyso Anime Tsundere’s, waa kuwan 22 + Kuwa ugu Fiican!
Tsundere's waxay u badan tahay nooca 'dere' ugu caansan bulshada anime.
Waxay ku soo baxaan inta badan wada hadalka iyo taageerayaasha iyaga la mid ah xoogaa.
Noocan dere ayaa nooc qabow u qabta qofka ay jecel yihiin ama jecel yihiin. Caadi ahaan rabshad iyo noqosho aan toos ahayn maxaa yeelay kibirkoodu uma oggolaan doono inay 'iyagu iska yeeshaan' dareenkooda.
In kasta oo aanan ahayn taageereha ugu weyn nooc kasta oo derejo ah, waan arki karaa sababta ay u madadaalayaan. Waxaana jira jilayaal sida Chitoge Kirisaki ama Umiko Ahagon oo aan jeclahay.
Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee Tsundere ee aad waligaa la kulmi doontid.
1. Taiga Aisaka (Toradora)
Taiga Aisaka waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan Tsundere ee ku jira anime. Way adag tahay in aan la ogaan cidda ay tahay tan iyo markii ay ku soo muuqato xusuusyo aad u tiro badan iyo wixii aan ahayn.
Iyadu waa astaamihii caadiga ahayd ee Tsundere illaa T, astaamaheeduna meel ugama bannaana in wax la weydiiyo.
Toradora waa nooca anime ee Taiga Aisaka uu yahay bilow buuxa (Tsundere on steroids), oo kaliya si loo macaaneeyo oo loo garaaco goor dambe.
Sababtaas awgeed ama waad jeclaan doontaa ama nici doontaa dabeecad sida Taiga oo kale ah.
La xiriira: 26 Quotes Anime oo qadhaadh ayaa laga soo qaatay Toradora
2. Khudaarta cagaaran (Dragon Ball Franchise)
vegeta db super
qaabka vegeta saiyan
Khudaarta waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan 'Tsundere's anime industry' weligiis waa la yaqaan. Xitaa kahor 'Tsundere' xitaa wuxuu ahaa erey la yaqaan oo lagu bilaabo.
Wuxuu had iyo jeer ahaa nooca qabow iyo meel fog. Ku madax adeyg inuu u diiriyo qof kasta oo hareerahiisa ah, xitaa haddii isagu qarsoodi ah jecel yahay ama ixtiraamaya.
Waxaan aragnaa wax isku mid ah oo la ciyaaraya Bulma ee DBZ.
Marka hore Bulma wuxuu dhibsadaa Vegeta, falcelintiisuna waa falcelinta caadiga ah ee Tsundere lagu yaqaan. Taasina waa run iyadoo la adeegsanayo DB-kii ugu dambeeyay inkasta oo Vegeta bislaatay oo horumartay.
3. Mikoto Misaka (A Gaariga Takhasuska Sayniska)
mikoto misaka Railgun koronto
Mikoto Misaka waa mid ka mid ah kuwa Tsundere ee aadan ka fogaan karin bulshada anime. La mid Taiga Aisaka.
Hal sabab ama mid kale, Mikoto Misaka waa mid xusuus mudan.
Taxanaha Railgun iyo Index ayaa caan ku ah bulshada anime sidaa darteed taasi waa ay jirtaa. Laakiin hal shay oo ku saabsan Mikoto Misaka waxay leedahay shaqsiyad guud oo weyn.
Iyadu waa suubban tahay, waxay leedahay is-hoosaysiin, waxayna badanaa ka hor marisaa baahida dadka kale nafteeda. Gaar ahaan haddii qofkaasi dhibaato ku sugan tahay oo ay iyadu caawin karto.
Khuseeya: Kuwani 17 Characters Characters waa kuwo aad u xishood badan oo ay adag tahay in la jeclaado iyaga
4. Grey Fullbuster (Dabiiciga)
grey buuxabuster tsundere
dhoola cadayn buuxda
Grey Fullbuster waa nin kale oo Tsundere ah dadka badankood kama fikiraan.
Isagu ma aha Tsundere kii ugu xumaa marka laga hadlayo wax kasta oo male ah, laakiin wuxuu ku sugan yahay dhulka Tsundere.
Dhamaan Faashadda Cawil Grey waligiis si dhab ah ugama qaado Juvia Lockser. Ama si kale u dhig - wuu ka cagajiidayaa inuu qirto ama la wadaago dareenkiisa Juvia. waxaa laga yaabaa sababta oo ah sida 'xoog' uu ugu yimaado isaga.
Gray waa isbarasho ka dib oo dhan, mana jecla inuu booskiisa ku soo duulo si aan xasilooneyn.
La xiriira: 15 Ka Mid Ah Kuwa Ugu Fiican Anime ee leh Dabeecad Weyn Oo Laysku Hayo
5. Rin Tohsaka (Habeen Joogto Qaddar)
wajiga maran miiraa tohsaka
Rin Tohsaka’s caan ah Tsundere oo ka mid ah taxanaha Habeenkii Masiirka. Waxay ka badan tahay oo kaliya halkudhigga Tsundere in kastoo.
Rin waa ka caqli badan tahay inta badan da'deeda, waxayna ka horeysaa waqtigeeda guud ahaan. Nooca ay tahay in ay wax ka fikirto oo aan ahayn mid dib-u-dhac ah mar haddii ay taas samayso kama dambeys ah go'aanka.
Waxay u egtahay nooc yar oo ka mid ah Erza Scarlet illaa inta ay noqonayso dabeecad adag oo dumar ah, laakiin iyadu waa Tsundere illaa T.
Khuseeya: Falanqeeyeyaasha Anime ee Dumarka ugu Fiican Kuwa Xooggan, Caqli Badan Awoodna Leh
rootiga shana xabxabka
shana dhoola cadeyn timo cas
Shana waxay ku habboon tahay Taiga, Mikoto Misaka, iyo kuwa kale ee 'qadiimiga ah' Tsundere ee ku jira adduunka anime.
Xaqiiqdii - Shana waa waxyi jilayaasha sida Taiga maxaa yeelay waxay jirtay illaa 2005-2006. Waqti dheer kahor kuwadan kale ee Tsundere ayaa bilaabay inay soo baxaan.
jeex ah nolosha majaajilo jacayl anime
Shana waxaa laga yaabaa inay leedahay dabeecad dagaal, laakiin caqabadda ka dambeysa ee ay dhigeyso waa gabar aan ammaan ahayn oo aan nafteeda hubin.
Iyo birta anime ee birta ah ee saacadaha dheeraadka ah leh jacaylka u dhexeeya MC'S.
7. Holo Wolfka Caqliga badan (Spice And Wolf)
Holo The Wolf Caqli badan waa 'khafiif ah' Tsundere oo uma badna sida kuwa kale ee liiskan ku jira. Laakiin iyadu waa hubaal inay ka mid tahay.
Markasta oo Kraft Lawrence, MC uu sameeyo wax Holo uusan jecleyn, waxay u ogolaaneysaa in la ogaado. Kaliya maaha qaab jir ahaaneed oo xadgudub leh sida sida badan oo Tsundere ah ay isu muujiyaan.
Tani waa waxa Holo ka duwan. Iyadu waa dabeecad lama ilaawaan ah oo ka mid ah haweenka ugu caqliga badan ee aan ku leenahay anime.
La xiriira: Kuwani waa xigashooyinkii ugu macnaha badnaa ee ka soo baxa taxanaha Baasaska iyo Wolf Anime
kyoko sakura waji qosol badan
Kyoko Sakura waa shaqsi aan jeclahay aniga. Waxaan la xiriiraa xooggeeda gudaha, dabeecadda madaxbannaan, iyo sida ay nafteeda ula xisaabtanto ficilkeeda.
Way fududahay in dad badani ay eedeeyaan kuwa kale ama farta ku fiiqaan, oo aan waligood masuuliyad ka saarin ficilladooda iyo cawaaqibka ka dhalan kara.
Laakiin Kyoko sidaas maahan.
Xaaladdeeda - sheekadeeda dhabarka ayaa ku jirta. Dabeecadda 'Tsundere' waxay la mid tahay ku darista shakhsiyadda adag ee birta ah ee Kyoko.
Inuyasha waa sida Vegeta, oo macnaheedu yahay inuu yahay 'Tsundere' qadiimi ah oo jiray ka hor intaan koobku noqon kuwa guud.
Inta badan taageerayaasha ayaa laga yaabaa inay seegaan astaamihiisa Tsundere mooyee runti ka fikir
Bilowgii anime Inuyasha had iyo jeer wuu ka warwareega inuu muujiyo dareenkiisa Kagome Higurashi. Xitaa waxay gaaraysaa heer uu Kagome ka cararo guriga isagoo ooyaya markii ay isku dhacaan.
Inuyasha waxay isu bedeshaa waqti dheeraad ah, sida Vegeta oo kale. Iyo labada astaamood 'ka shaqeeyaan khilaafaadkooda' iyo jacaylka ayaa ubaxaa dhamaadka sababtaas darteed.
tensai ryuugajou anime
Ikkyuu Tensai waa bare sare (iyada ereyadeeda) waxayna ku cadeysaa ficilkeeda.
Hal shay oo muhiim ah oo aad ka baran karto Ikkyuu Tensai waa awooda is aaminka.
Waxay aaminsan tahay inay tahay baariste sare isla markaana nafteeda u sheegto maalin kasta. Taasina waxay Tensai ku hogaamineysaa inay isku daydo inay cadeyso inay sax tahay markay tahay in la xaliyo kiis.
Cunsurkaan shakhsiyadda Ikkyuu Tensai ayaa ah waxa iyada kaga duwan kan celceliska Tsundere.
Waxay ka badan tahay uun hadal-haynta.
11. Lucia Konohana (Dib u qor)
lucia rewrite anime tsundere e1585058429815
lucia konohana dib u qor e1585058441726
Lucia Konohana waa hypochondriac. Qofka ka baqaya inuu ku taabto dadka kale ama wax gacmahiisa gacmaha ah.
Xaaladda Lucia tani waxay ka timid dhacdo carruurnimo oo dhaawacday maskax ahaan. Marka sheekada weyn ee Rewrite Waxay xirtaa gacno gashi maalin kasta si ay 'wax uga qabato' arrinteeda.
Ka baxsan halista Luxiimadeeda hoose, iyadu waa Tsundere oo kaftanka ayaa socodsiiya koorsadiisa waqtiyo ku filan si loo ogaado.
nino nakano dhoola cadeyn
Nino Nakano waxay u badan tahay inuu yahay Tsundere ugu caansan sanadihii la soo dhaafay inuu ku quusto goobta.
Dhamaan mataanaha mataanaha ah, Nino waa tan ugu cad Tsundere.
Nino waxay sameyn doontaa wax kasta oo ay u baahan tahay si ay u weeciso dareenkeeda una dhaqanto qaab ka soo horjeedda sida ay dareemeyso.
Iyadu waa dabeecad madax adag iyadoo isla weyni ku jirto. Oo leh 'sawir' si loo ilaaliyo.
Xilliga 2-aad ee soo socda ee Quintessential Quintuplets tani way is beddeli kartaa haddii ay horumarto oo bislaato.
Nao Tomori wuxuu dareemayaa sida Tsundere oo isagu is og.
Iyadu sifiican ayey u taqaanaa nacaladda waxa ah, iyo sida ay u dareemeyso qof ama waxyaabaha qaarkood. Laakiin way iska diidi doontaa oo falcelin doontaa gardaro sikastaba.
Haddii aan ka hadlayno Tsundere iyadu maaha nooca caadiga ah, waxayna leedahay tayo badan oo la mid ah dabeecad ahaan.
Siyaabaha qaarkood waxay astaamo kula wadaagtaa Erza Scarlet. Marka laga reebo inay yartahay, laakiin wali wey bislaatay.
14. Maki Nishikino (Mashruuc Jacayl Dugsi Sanam Idol)
maki love live tsundere 1
maki nishikino oo dhoola cadeynaya
Maki Nishikino waa ubad. A waifu. Dabeecad dumar ah waxaan dareemayaa inay u qalanto iftiin badan oo ka baxsan dunida Love Live.
Waxay karti u leedahay inay ku ciyaarto biyaanada, waxayna leedahay qaddarin la yaab leh oo khushuucsan inkasta oo ay mudnaan leedahay marka loo barbar dhigo astaamaha kale.
Ha qaldamin in kastoo - Maki Nishikino waa Tsundere iyada oo loo marayo iyo iyada oo loo marayo. Oo waligeed ma guul darreysato in la ogaado.
15. Emi Yusa (Ibliisku Waa Waqti Qayb)
emi yusa oo farta ku fiiqaya
geesi emilia timo cad 1 e1585059347300
Emiusa, sidoo kale loo yaqaan Hero Emilia waa malaa'ig ku jirta taxanaha anime (ciqaab looma jeedin). Waxay awood u leedahay inay ka adkaato Shaydaanka laftiisa, taasina waxay la xiriirtaa sida dhagarta meesha ugu dhacdo.
Emi waxay si qoto dheer u danaynaysaa dadkeeda. Isirka aadanaha. Oo waxay leedahay nacayb qiil u leh shayaadiinta iyo ciidanka Shaydaanka. Wax kastoo ay qabato waa wax ay ka faa’iideysato dadka kale.
In kasta oo ay tahay dabeecad aan naf-hurnimo lahayn oo madax fiican garbaheeda saaran, haddana iyadu siyaabo kale ayay Tsundere u tahay.
Khuseeya: 19 Gabdho Anime ah oo Timo Cas leh oo leh Shakhsiyaadka Qaaska u gaarka ah
16. Lina Inverse (Dilayaal)
fikirka qalloocsan ee lina
lina rogaal celin e1585059440357
Lina Soo Noqosho waa mid ka mid ah magicilada ugu awoodda badan Slayers. Iyo xitaa mid ka mid ah jilayaasha anime ee ugu awoodda badan. Gaar ahaan hadaan diirada saarno dhadig jilayaasha.
Ahaanshaha qof dabeecad ah oo timid horaantii 1990, Lina Inverse waa wali Tsundere kale oo dhiiri galiyay isbedelka aan maanta naqaano.
In kasta oo Lina Inverse ay leedahay astaamaheeda wanaagsan, haddana waa qof hunguri weyn, dabeecad danayste ah oo nafteeda ka fikirtaa waqti badan. Iyo habdhaqankeeda madaxnimo iyo dabeecaddeeda Tsundere ayaa uga sii daraysa.
La xiriira: 7 Astaamayaasha Dumarka Ugu Anfaca Badan
17. Sistine Fibel (Rokudenashi)
sistine fibel blush
Sistine FIbel oo ka socda Rokudenashi waa qayb ka mid ah jihooyinka cusub ee jilayaasha animeyaasha leh 'dhegaha bisadaha' sabab la'aan marka laga reebo qurxinta. Iyadu xitaa ma aha 'bisad' in lagu bilaabo.
Tani waxay ku kasbataa iyada magaca 'bisad cad' oo uu qoray Glenn Radars, oo ah halyeeyga. Tani waxay ku ciyaareysaa shakhsiyadeeda Tsundere xoogaa.
Tilmaamaha Tsundere dhinac - Sistine Fibel waa qof qalbi naxariis leh. Iyo ujeedooyin saafi ah.
Sida Erza, waxay dejisaa heerarkeeda mana u dulqaadan doonto degitaanka wax ka yar. Waxay ka filaysaa isla dadka kale, sidoo kale.
silsiladda xargaha tsundere
fidinta xadhigga xargaha
Eriri Spencer waa nooca Tsundere oo aan rabshad iyo aflagaado lahayn sida aan ku aragno Taiga Aisaka ama Zero oo ka socda The Familiar of Zero.
Taxanahan Ecchi - Eriri waa farshaxan hentai ah. Ama waxay ugu yeeraan Dōjinshi.
Qaar badan oo ka mid ah shaqadeeda iskeed u daabacday ayaa si cad u galmoon. In iyada laga dhigo mid madax-bannaan oo iskeed isu taagtay, dhaqaale ahaan.
Waa cunsurkan farshaxanka ee Eriri Spencer oo ka dhigaysa inay kaga duwan tahay a joogto ah Tsundere.
Khuseeya: 33 Jilayaasha Anime ee GREAT Blonde
19. Ichiko Sakura (Gabadh Nasiib Wanaagsan)
ichiko sakura walwalsan
Ichiko Sakura waa kan ugu b * tchy Tsundere taariikhda trope this. Iyadu waa dabeecad xumaatay, oo xaq u leh, waxaana loo sara kiciyey inay rumaysato in adduunku ka ifayo dhammaadkeeda dambe.
Gabadh Nasiib Wanaagsan wuxuu ku tusayaa saamaynta aad qof ku yeelato sidan, oo aad qof siiso xurmo aad u tiro badan adigoon u baahnayn shaqo loogu talagalay
Ku dar tan dusheeda shakhsiyadeeda Tsundere waxaadna haysataa cunto karinta aafada.
In kasta oo anime-kani yahay mid qosol badan, iyo Ichiko sameeyo u bislaada qayb kasta oo ka mid ah taxanahan kooban.
Weli waa mid ka mid ah majaajilooyinka ugu qosolka badan ee aan kugula talin lahaa, oo leh dabeecad la yaab leh oo ku socota dabeecad ay adag tahay in la jeclaado.
Khuseeya: 12 Ka Mid Ah Kuwa Ugu Funniest Rom Com Anime Kuwaas Oo Ingiriis Lagu Beddelay
20. Aniga (Akame Ga Dil)
my farxad faraxsan akame ga dil
waji qosol leh
Aniga oo ka yimid Akame Ga Kill wuxuu la mid yahay Ichiko, oo macnaheedu yahay bilowgii waxay u dhaqantaa sidii wax adag in lala macaamilo Waad arki kartaa sida ay uga sii dartay Tatsumi (MC) iyada oo aan macno lahayn.
Qeyb ka mid ah tan ayaa ah shakhsiyadda Mine's Tsundere oo sameyneysa wixii 'loogu talagalay inay sameyso. Laakiin sida jilayaasha sida Taiga Aisaka, waxaa jira sabab qoto dheer oo ku saabsan sababta.
Miinada ayaa ku adag banaanka, toosan iyo xoogaa qallafsan sababtoo ah sida ay u weynaatay. Iyo cunsuriyada iyo eexda waxay la kulantay inay haysato 'dhiig shisheeye' DNA-keeda.
Chitoge Kirisaki waa mid ka mid ah 'Tsundere' oo aan ka jeclahay inta badan.
Waxay dareemeysaa wax ka macquulsan oo run ka ah nolosha Tsundere caadi ah oo xanaaqsan oo sun u ah aawadeed.
Chitoge wuxuu jecel yahay in badan oo ka mid ah Tsundere oo la il daran 'marna qiran dareenkeeda runta ah' trope aad ku aragto riwaayadaha jacaylka.
Ilaa xilli 3aad la sii daayo mooyee, weligeen ma ogaan doonno sida ay wax noqon doonaan.
22. Kaname Chidori (argagax birta oo buuxa)
kaname chidori murugo e1585065189852
kaname chidori careysan tsundere
Kaname Chidori waa qayb ka mid ah xilligii dhiirrigeliyay koobabka Tsundere. Waxay ku jirtay ficil ilaa 2002-2003-ish, mahadnaqa Kyoto Animation oo soo saaray xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee FMP.
Kaname Filimkiisii ​​ugu dambeeyay ee Sousuke Sagara horumar kama uusan gaarin xilli ciyaareedkii 4aad: Guul aan la arki karin. Tani waa halka dabeecadda Kaname ay dhab ahaantii isbeddelayso oo qaab kale u socoto.
Xilliyadii hore, gaar ahaan xilligii 1aad wuxuu muujiyaa astaamaheeda Tsundere ee saameynta maadda leh in ka badan kuwa kale.
Tixraacyada Sharafta leh:
Kagami Hiiragi (Lucky Star).
Alice Zuberg (Seef Art Online).
Nami (Hal shey).
Julis Alexia (Dagaalkii Xiddigta).
Kurisu Makise (Steins Gate).
15 + Kuwa Calaamadaha Yandere Ugu Fiican
22 Astaamaha Ugu Wanaagsan ee Anime Dandere ee ay tahay inaad ogaato
taxane anime sare waqtiga oo dhan
jeex ugu fiican nolosha anime loogu magac daray
anime ugufiican dhamaan waqtiga doorashada